Nhau - Ngatibatei mutambo wekudzikisira mashanga
Plastiki yakanyorwa seimwe yeakanyanya kugadzirwa ezana ramakore rechi20. Plastiki yakafanana nebakatwa rinocheka nekwose. Nepo ichiunza zviri nyore kwatiri, zvinounzawo mutoro unorema kunharaunda.
Nekudzivirira kusvibiswa kwevachena, nyika dzakasiyana dzakaburitsa zvakateerana mirau. Pakutanga kwa2020, China yakaburitsa "Maonero Ekuwedzera Kusimbisa Kurapa Kwekusvibisa KwePurasitiki". Pakupera kwa2020, indasitiri yekudyira muChina icharambidza kushandiswa kwemashanga epurasitiki asingashatisike.
Parizvino, pane matatu makuru marudzi emashanga atakasangana nawo pamusika: PP mashanga, Pura mashanga, uye mapepa mashanga.
Kubva kuruboshwe: mapepa mashanga, PSA mashanga, PP mashanga
Tichifunga nezvekudzikisira mashandiro emastraw akasiyana, isu takaronga makwikwi ekudzora mashanga.
Takadyara mashanga ezvinhu zvitatu zvakasiyana muvhu kuti titeedzere kudzora kwemanyowa ehuswa hwezvinhu zvakasiyana pasi pechisikigo uye toona zvakaitika kwavari mushure memazuva makumi manomwe:
Mushure memazuva makumi manomwe ekudzikisira manyowa, manyowa ePP akange asina kumboshanduka.
Mushure memazuva makumi manomwe ekudzikisira manyowa, mashanga ePLA haana kuchinja zvakanyanya.
Mushure memazuva makumi manomwe ekudzikisira manyowa, kupera kwemashanga emapepa kwave kuora nekudzikira.
Mhedzisiro yemitambo:Mapepa mashanga akakunda uku kutenderera kwemakwikwi ekudzikisira.
Isu tinoita fananidzo yakapusa yekushambadzira kwezvakatipoteredza mashanga matatu:
Kuvandudzwa kana kwete
Hungu asi zvakaoma kwazvo
Hungu uye nyore
Post nguva: Aug-09-2021